Yintoni le ingalunganga ngamacala amane? | Martech Zone
Yintoni le ingalunganga ngamacala amane?
NgoLwesine, Aprili 7, 2011 NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 8, 2011 Douglas Karr
Andifanelanga ukukhetha nje kumacala amane ... Ndinombandela ofanayo kuninzi lwezicelo zosasazo zasekuhlaleni. Ingxaki iyafana phantse kuwo onke amaqonga entlalontle. Nge-Foursquare, ingxaki icace gca, nangona kunjalo. Amashishini afuna ukuthatha ithuba leqonga- kodwa akukho ndlela yakwenza.
Ngenxa yoko, ufumana uburhabaxa ngoluhlobo… enye inkampani engekho kufutshane nam kwaye ndingenabudlelwane nayo, indicela ukuba ndibe ngumhlobo wayo.
Kuhlala kunokwenzeka ukuba kukugaxekile, kodwa andiqinisekanga. Ngokwenene eli inokuba lishishini elijolise kum kwaye linqwenela ukuba babe nobudlelwane nabo. Ingxaki yokwenyani, ewe, kukuba akukho ndlela yakwenza oko nge-Foursquare-ke kufuneka babhenele kule ndlela.
Ubudlelwane phakathi kwamashishini nabathengi kufuneka buyeke ukuba yinto eyenzeka emva kwexesha ekudaleni amaqonga amajelo eendaba ezentlalo. Kubonakala ngathi ekuphela kwexesha lamashishini anikwa ithuba kula mashishini kuxa kukho isidingo sokwenza ingeniso. Yiyo loo nto i-Foursquare ekhethekileyo.
Ukuba ndilishishini, ndingathumela into ekhethekileyo kumacala amane abemi ukuze abathengi basebenzise… bakube bengenile. Kukho omnye umba ngeeMacala amane. Uninzi lwamashishini aludingi ukurhwebesha abathengi emva Sele beze ngomnyango wangaphambili-ingxaki ibafumana ukuba umnyango wangaphambili.
Isikwere siphulukene nethuba elikhulu apha. Abathengi ufuna ukudibanisa kunye namashishini-eyahlukileyo kunokubongozwa kwaye ubhengezwe kuwo ngamashishini. Iintengiso azisebenzi… ubudlelwane buyenza. Ungathini ukuba i-Foursquare, endaweni yoko, ikunike ujongano olucocekileyo lokufumana iindawo ezikungqongileyo abahlobo bakho bahlala rhoqo- kunye nesixhobo sokwahlulahlula ukuze uhlulahlulo uhlobo lweshishini.
Kwaye kuthekani ukuba i-Foursquare inike amashishini ithuba lokupapasha izibonelelo kwinethiwekhi yakho yabahlobo kwaye bazibandakanye nawe xa ungena? Ngoku eso sisixhobo esiza kuthi sixatyiswe ngamashishini kunye nabathengi!
Crowdsource yakho B2B Ukucocwa kweDatha
Imigaqo yeWordPress ineZinto ezingaphandle, nazo
Epreli 8, 2011 ngo-12: 29 PM
Mhlawumbi esinye isizathu sokuba ndifumanise kwaye ndiphuhlise le app yefowuni bendikhe ndangqungqa kumcimbi ongwevu okomzuzwana.